कीर्तिनिधि विष्टको अन्तिम अन्तरवार्ताः अब गरे ओलीले केही गर्छन्, अरुबाट आश छैन
Friday, 10 Nov, 2017 11:24 PM
पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको शनिवार निधन भएको छ । देशप्रेमी प्रधानमन्त्रीका रुपमा विष्टको ख्याती थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले रुचाएका प्रधानमन्त्रीमा किर्तिनिधि बिष्ट एक नम्बरमा आउँथे । ०२६ सालमा चीनसँग जोडिएको उत्तरी सीमानाबाट भारतीय चेकपोष्ट हटाएर भारतले नरुचाएका प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनिएका बिष्टलाई नैतिकवान प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि लिइन्छ । उनी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला देशको मुख्य प्रशासनकेन्द्र सिंहदरवारमा आगलागी भयो, उनले नैतिकताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेका बेला बिष्टलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदको उपाध्यक्ष समेत बनाएका थिए । गतवर्ष पुस ७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री बिष्टसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको अन्तिम अन्तरवार्ताः
ल हेर्नुस् त ! देशलाई दुख्दा नाकाबन्दी पनि भन्न नसक्ने ठूलो पार्टी रे हाम्रो । त्यस्तो पार्टी नेपालीको पार्टी हो ? त्यो नाकाबन्दीलाई त म दुब्र्यवहार भन्छु ।
केपी ओली पनि बिमारी छन् भन्ने सुनेको थिएँ । अहिले त ठीकै रैछन् । कति बाँच्ने हुन्, अलि लामो कालसम्म बाँचुन् । देशको लागि उनले उठाएका मुद्दा पूरा गराउन्जेलसम्म बाँचुन् । नेपाली जनता त्यहि चाहिरहेका छन् ।
म प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको नेतृत्व बल्लभ भाइ पटेलसँग थियो, पछि इन्दिरा गन्धी आइन् । भारत नेपाललाई सिक्किम नै बनाउन चाहान्थ्यो, नेपालमा त्यसरी सिधासिधी गाडिन सक्दैनथ्यो । अहिले भारतले त्यो प्रयास गरेको छ । नेपाललाई भारतले निल्नै खोजेको भान हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा केपी ओलीले जे गरे नि ! त्यो देशको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको काम गरे । उनले भारतले नाकाबन्दी लगाएर देशलाई कज्याउन लागेका बेला चीनतिर बाटो खोल्ने जे काम गरे, उनले देशलाई सयौं गुणा अघि लगाए ।
पृथ्वीनारायण शाह थिए, त्यसपछि महेन्द्रले देशको लागि आफ्नो सत्ता नभनी लागे र अहिले केपी ओली शताब्दीयौंपछि आएका छन्, जसले झर्दै गरेको देशलाई बँचाए ।
लामो समयको अन्तरालमा ओली दूरदर्शी चिन्तन भएको नेता भन्ने प्रष्ट गर्छ । अब भारतले जति नै प्रयास गरे पनि नेपालको नक्सा बदल्न सक्दैन । यो कुरामा ढुक्क भैयो । यो श्रेय सबै ओलीलाई जान्छ ।
.बिहिबार, पुस ७, २०७३ मा प्रकाशित